SEENOFII–Barreessituu – Beekan Guluma Erena
SEENOFII–Barreessituu	Beekan Guluma Erena
Seenaa, Uncategorized April 10, 2016SEENAA JIREENYAA...	2 Comments
Lalisee Mokonnon eenyu?
Maqaan koo guutuun Lalisee Mokonnin Dinqaan jedhama. Abbaa koo obbo Mokonnin Dinqaafi harmee koo Aadde Ijjigaayyoo kabbadaarraa Hagayya 3, 1994 A.L.A ‘tti godina Wallagga bahaa, aanaa Nuunnuu Qumbaattin dhaladhe. Akkuma daa’ima hedduu biyyoo daakee, dhoqqeerra gangaladhee taphadheen guddadhe. umuriin koo barnootaaf yoo ga’u achuma aanaa nuunnuu qumbaattin oolmaa daa’immanii seene. Harmeen koo hojjettuu mootummaa waan taateef hojiif yeroo isheen jijjiiramtu anis mana barnootaa jijijjiiraan baradhe. Kutaa 1ffaa fi 2ffaa mana barumsaa Nuunnuu gabaa roobiittan baradhe. Kutaa 3-5ffaatti magaalaa naqamteetti mana barumsaa Abdii borii, kutaa 6ffaa mana barumsaa kaatolik kidaane miratii naqamteetti, sanaan boodas gara Aanaa nuunnuu qumbaatti deebi ‘un mana barumsaa Nuunnuu gabaa roobiitti kutaa 7 fi 8, mana barumsaa sadarkaa 2ffaa nuunnuutti ammoo kutaa 9ffaan baradhe. kutaa 10ffaa mana barnootaa ASK naqamteetti, kutaa 11 fi 12 mana barumsaa qophaa’ina Naqamteettin xumure. Ijoollummaa koo kaasee aadaa fi dudhaa seenaa koo maatii, naannoo fi mana barnootaatti baraan guddadhe. Keessumaa afoola oromoo hedduu ijoollummaa kootti taphachaan guddadhe. Galgala galgala abidda qarqara taa’ee hin ta’in malee maashoo(faanosii) qabsiifannee abbaan keenya hibboo fi abboonteen nu taphachiiseera. carraa horii eeguu hin arganne; ta’us tapha tikeen taphattu ijoollummaa kootti obbolaa koo wajjin taphadheera.
LALISEE MOKONNIN DINQAA
FB: Lalise Mekonnin
NABAASI BIRMADUU →
2 thoughts on “SEENOFII–Barreessituu”	Gammachuu(Gamtaa)April 10, 2016 at 6:09 pmPermalink	Imalaaf ka’umsi Laliseen calqabdee jirtu kun,shoora/qooda shamarran keenya bahuu qaban keessatti isa ol’aanaa ta’ee argama.Bu’aa xaarii keetii kana qooddachuufis abdiidhaan si eegna;firiin ifaajjii gola sammuukeetiis misee haa lalisun je’a.
Reply	tokkummaan humnaApril 10, 2016 at 6:42 pmPermalink	Tokkummaan uummata keenyaa beekumsa irratti kan hundaa’e ta’uu qaba. Hojiin hojjechaa jirtan sanaaf gumaata guddaa gochuu waan danda’uuf jabeessaa itti fufaa!